TORITENY Alahady 04 Septambra 2017 | FJKM Amboniloha
Salamo 25 : 1 – 7 / Matio 27 : 57 – 62 / I Petera 4 : 12 – 19
Ny olona menatra dia miafinafina , tsy sahy miseho , matahotahotra sy mahina . Tsy vitsy ny Kristiana no tratra izany toetra sy fiainana izany noho ny antony maro samihafa ka manjary mijaly anaty.
Ahoana ary no fomba ialana amin’ny henatra ka ahafahana mijoro ho vavolombelon’ny Tompo?
Ny Epistily I Pet 4 : 12 – 19 no andeha hanakarantsika ny toromarika omen’ny Tompo.
I – Ialao ny toetra ratsy
Ny toetra ratsy na ny fahazaran-dratsy mbola iainan’izay mitono-tena ho Kristiana dia tena mahamenatra tokoa. Vato misakana voalohany tsy ahafahana mijoro ho vavolombelon’ny Tompo . Ohatra : Izaho mitory ny fitiavan’i Kristy nefa tia manaratsy ny hafa hatrany (fosafosa) , mivelona amin’ny halatra sy ny tsy fahamarinana, tiako ny miraharaha ny fiainan’ny hafa ka miteraka fahatafintohinana ho an’ny manodidina , sns…. Tsy vitsy ireo efa manana andraikitra amin’ny asa fanompoana no tafalatsaka ao anatin’izany fiainana mifanipaka amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany. Ireny toetra ratsy voatonona ireny anefa dia tena manamaloka fitoriana ny Filazantsara , manamaloka ny fitahiana arotsak’Andrimanitra , manamaloka ny fiainan’ny mpanompon’Andriamanitra .
Hafatra : Mijoroa ho tena mpanompon’Andriamanitra « Kristiana » olom-baovao ao amin’ny Kristy , ka aza iverenana intsony ny fahotana , ialao ny toetra ratsy rehetra.
Rehefa mahita ahy miala amin’ny fahazaran-dratsy nymanodidina ka maneho toetra araka ny sitrapon’Andriamanitra aho dia tonga mandray an’I Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy azy koa izy satria hitany ny hatsaran’ilay Jesoa ao anatiko.
II – Ataovy ho zava-dehibe ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra
Ho avy ny andro iatrehana ny fitsaran’Andriamanitra, ary miantomboka amin’ny ankohonan’Andrimanitra izany , cf and 17 . Koa raha miantomboka amiko izany , izay mba miezaka manao ny asan’Andriamanitra, mahafoy fotoana, vola, tena sns….. mba manao ahoana ireo tsy mbola ankohonan’Andriamanitra? Manana adidy amin’ireny eo anatrehan’Andriamanaitra aho , hanala azy ireny ao anatin’ny faharatsiana toy izay efa nananarana ahy tany aloha. Tompon’andraikitra amin’ny famonjena ny fanahin’izay ireny ny mpanompon’Andrimanitra efa nanaiky an’I Jesoa Kristy ho tompon’ny fiainany.
Marina fa misy ny fahasahiranana amin’ny endriny samihafa nefa tsy atao sakana ireny satria Jesoa Kristy mihazona sy manohana ahy tsy hianjera , ary koa manosika ahy handroso hatrany amin’ny fanarahana Azy ka tsy hitsanga-menatra amin’ny fijoroana vavolombelona eo amin’ny fiainana.
Fehiny : Raha mahatsiaro fa manana anjara amin’ny fihavian’I Jesoa Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra aho , dia miandry ahy Jesoa mba hamonjy ny fanahin’ireo izay mbola ivelan’ny fanjakan’Andriamanitra. Miara mijaly amin’ny Kristy aho ho famonjena ny fanahin’izy ireny .
Catégories :	Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 8 septembre 2017